Fahasamihafana eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / biokimia / fahasamihafana eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2
27 Novambra 2019 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny angiotensin 1 sy 2 dia ny angiotensin 1 dia novokarin'ny angiotensinogen tamin'ny alàlan'ny asan'ny renin anzima, raha angiotensinogen 2 kosa dia novokarin'ny angiotensin 1 tamin'ny alàlan'ny enzim-niova fo angiotensin.
Angiotensin dia peptide izay mihetsika amin'ny hozatra malama ary mampiakatra ny tosidra. Misy karazany telo ny angiotensins: angiotensin 1, 2 ary 3. Angiotensinogen miova ho angiotensin 1 amin'ny alàlan'ny catalysis ny renin énzim. Ny Angiotensin 1 dia mivadika ho angiotensin 2 amin'ny fiasan'ny angôniôniôma-mampiova angiotensin. Izy io dia ny karazana angiotensin izay mihetsika mivantana amin'ny lalan-dra, ka miteraka fihenjanana ary mampiakatra ny tosidra. Angiotensin 3, etsy ankilany, dia metabolite an'ny angiotensin 2.
2. Inona ny Angiotensin 1
3. Inona no atao hoe Angiotensin 2
4. Ny fitoviana misy eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2
5. Fampitahana mifanila - Angiotensin 1 vs 2 amin'ny endrika Tabular
Inona ny Angiotensin 1?
Angiotensin 1, antsoina koa hoe pro-angiotensin, dia proteinina iray namboarina avy amin'ny angiotensinogen avy amin'ny hetsika renin. Izy io dia amin'ny endrika tsy miasa ary miova ho angiotensin 2 noho ny fihenan'ny hery enzim-manova angiotensin.
Sary 01: Làlana Renin-Angiotensin
Angiotensin I dia tsy manana hetsika biolojika mivantana. Saingy, izy io dia miendrika molekiola mialoha ho an'ny angiotensin 2. Ny ambaratonga Angiotensin 2 dia sarotra refesina. Noho izany, ny angiotensin I dia refesina ho toy ny refin'ny hetsika renin amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fihenan'ny angiotensin 1 amin'ny alàlan'ny fanakanana ny anzima miova amin'ny plasma sy ny proteolysis amin'ny angiotensinases.
Inona ny Angiotensin 2?
Angiotensin 2 dia proteinina iray namboarina avy amin'ny angiotensin 1 avy amin'ny fiasan'ny angôniôniôma nanova angiotensin (ACE). Noho izany, ny angiotensin 1 no mitarika ny angiotensin 2. Ny tena asan'ny angiotensin 2 dia ny fihenan'ny lalan-dra mba hampiakarana tosidra. Hafa noho ny fiasana mivantana amin'ny lalan-dra, angiotensin 2 dia manatanteraka asa maro mifandraika amin'ny voa, ny fihary adrenal ary ny hozatra. Ny Angiotensin 2 dia mampitombo ny fahatsapana hetaheta sy faniriana sira. Ao amin'ny fihary adrenal, angiotensin 2 dia mandrisika ny famokarana aldosteron. Amin'ny voa dia mampitombo ny fihazonana sôdiôma ary manova ny fomba fanivanan'ny voa ny ra.
Sary 02: Angiotensin 1 sy 2
Ny Angiotensin 2 dia tokony tazonina amin'ny ambaratonga mety amin'ny vatana. Ny angiotensin 2 be loatra dia mahatonga ny fihazonana ny tsiranoka be loatra ao amin'ny vatana. Mifanohitra amin'izany, ny haavon'ny angiotensin 2 ambany dia mitana ny fihazonana potasioma, ny fahaverezan'ny sodium, ny fihenan'ny tsiranoka ary ny tosi-dra ambany, sns.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2?
Ny angiotensin 1 dia novaina ho angiotensin 2. Noho izany, angiotensin 1 no mitarika ny angiotensin 2.
Ny fanovana ny angiotensin 1 ho 2 dia mety hosakanan'ny fanafody manakana ny ACE.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2?
Angiotensin 1 dia proteinina iray izay molekiola mialoha ho an'ny angiotensin 2 ary angiotensin 2 kosa no proteinina izay miasa mivantana amin'ireo lalan-dra ho an'ny famoretana sy hampiakarana ny tosidra. Ka io no mahasamihafa indrindra ny angiotensin 1 sy 2. Ankoatr'izay, ny fahasamihafana lehibe iray misy eo amin'ny angiotensin 1 sy 2 dia ny angiotensin 1 dia proteinina tsy miasa, raha ny angiotensin 2 kosa dia molekiola mihetsika.
Ankoatr'izay, ny renin dia ny anzima izay mandrindra ny famokarana angiotensin 1 raha ny anzima mampiova angiotensin kosa dia ny anzima izay mandrindra ny syntesis an'ny angiotensin 2. Raha ny tokony ho izy, ny angiotensin 1 dia mpialoha lalana lehibe ho an'ny angiotensin 2 raha angiotensin 2 kosa dia tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ny tosidra , rano anaty sy vatan'ny sodium. Noho izany, amin'ny lafiny fiasa, dia tsy mitovy ihany koa ny angiotensin 1 sy 2.
Famintinana - Angiotensin 1 vs 2
Angiotensin 1 sy angiotensin 2 dia karazana angiotensin roa, izay proteinina. Angiotensin 1 dia tsy manana asa biolojika. Amin'ny endrika tsy miasa izy io. Saingy, izy io dia miasa ho toy ny molekiola mialoha ho an'ny fananganana angiotensin 2. Etsy ankilany, angiotensin 2 no endrika mavitrika izay mahatonga ny lalan-dra ho kely kokoa. Manampy amin'ny fitazonana ny tosidra sy ny fifandanjan'ny tsiranoka ao amin'ny vatana izany. Noho izany dia mamintina ny tsy fitovizan'ny angiotensin 1 sy 2.
1. “Angiotensin I.” Lohahevitra momba ny siansa mivantana, misy eto .
2. “Angiotensin.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 21 Aog 2019, Azo zahana eto .
1. “2712 Renin Angiotensin System-01” Nosoratan'i OpenStax College - Anatomy & Physiology, tranokala Connexions , 19 Jun 2013 (CC BY 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. “Fampitahana Angiotensins I sy II” Nosoratan'i Fvasconcellos - Asa manokana, aorian'ny fampidirana PDB 1N9U (angiotensin I) sy 1N9V (angiotensin II) (Domain Public) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny proteinina fibre sy globular Fahasamihafana eo amin'ny Protease sy Peptidase Fahasamihafana eo amin'ny vy Carbonyl sy Ferrous Sulphate Fahasamihafana eo amin'ny catalyst sy ny mpanohitra Fahasamihafana eo amin'ny glycosylation sy glycosidation
Fahasamihafana eo amin'ny WordPress sy Blogspot
Fahasamihafana eo amin'ny Gastritis sy Gastroenteritis
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny vy kisoa sy ny vy vita amin'ny vy
Fahasamihafana eo amin'ny Sinoa sy Mandarin
Fahasamihafana eo amin'ny Train sy Locomotive